Ammaanka Bossaso oo ka sii daraya iyo askar caawa la laayey (dhegayso) – Radio Daljir
Diseenbar 28, 2018 8:50 g 3
Kooxo hubaysan oo aan haybtooda la sheegin ayaa caawa maqribkii waxa ay weerar ku soo qaadeen askar ka tirsan Ciidamada Booliska Gobolka Bari, kuna sugnaa barxada weyn ee ka soohorjeedka shirkadda Golis. Qaraxaas waxaa ku dhintay laba askari waxaana ku dhaawacmay askari.
Labada askari ee qaraxa ku dhintay ayaa kala ah Axmed Aadan Jaamac (Salo) iyo Bucurde Jaamac Gaab oo labaduba ka tirsanaa ciidamada Buuraleyda Galgala ee dagaalka kula jira kooxda al-Shabaab ee Buuraleyda Silsiladda Golis. Askariga saddexaad oo dhaawac culus uu madaxa ka gaaray, horayna dhaawac dhabarka ahi uu Galgala ka soo gaaray ayaa isna ka tirsanaa isla ciidamada buuraha Galgala.
Bishii la soo dhaafay ee Noofembar iyo tan hadda dhammaadka ah ee Diseember ayaa ahaa laba bilood oo amni-xumida Bossaso ay gaartay heerar cusub, dhan qarax, dhaawac, iyo waliba dilal joogto ah. Intaas ayaa haddana waxaa feer socda ayada oo duleedka Bossaso ay ka dheceen dagaalo u dhexeeya labada kooxood ee al-Shabaab iyo Daacish (ISIS).
Tan iyo intii ay wiiqmeen ciidamada Booliska Puntland, siiba kuwa Bossaso, Taliyihii Qaybta Gobolka Bari Cabdixakiin Yusuf waxa uu isku sharraxay Xildhibaan Gobolka Mudug, ammaanka Puntland-na waxaa si toos ah ula wareegay Ciidamada Ammaanka Puntland ee loo yaqaan Puntland Security Force (PSF). PSF waxaa maalgaliya Dowladda Mareykanka, siiba Ciidamada Qalabka Sida ee Mareykanka iyo Taliskooda AFRICOM ee Stuttgart, Germany, toosna hadda u hoosyimaada Taliska CJTF-Horn of Africa (@CJTFHOA)
Dilka caawa ee labada askari ee magaalada Bossaso iyo dhaawaca halka askari oo dhammaantood ay ka tirsanyihiin ciidamada argagixiso la diririka ee buuraleyda Golis ayaa waxaan weli ka hadlin Taliska Booliska Puntland iyo Taliska Ciidamada Ammaanka Puntland ee PSF-ta.
Yoji 4 months
Askarta allaha u naxariisto
Talaboyin ligi ku ah koxahan in laqado walagu qasban yaha. Sida muqdisho kale in askartu labo labo isu raacdo. Iyo in bandow an waqtigisa lashacin maqribadi la howl galsho ayado shacab la ilaalinayo. In askar dharcad ah oon la aqoon magalada lakeno una hubaysan sida kooxahan oo kale.
Xaamid 4 months
War waxaan gaala dabada ka wade waliba ethopia cadiwga so jireenka ah we somaliyA